Ngụgụ Clicker | ThatsLuck.com
A Clicker maka ogologo sessionsgba Cha Cha sessions
Ndagide Clicker bụ sọftụwia ọhụrụ roulette nke ga - enyere gị aka ihu ezigbo marathons egwuregwu ma ọ bụrụ na atụmatụ gị gụnyere ịme nọmba otu ma ọ bụ otu ohere maka ọtụtụ ma ọ bụ ọtụtụ ntụgharị.
Na panorama nke Pịa maka roulette n'eziokwu, ihe yiri nke ahụ furu efu; n'ezie, ọ bụrụ na inweela ohere iji ngwaọrụ ndị ọzọ dịka ► Roulette Turbo Clicker, ma ọ bụ ihe kacha ọhụrụ ► Pịa Gburugburu, ị n'ezie ghọtara uru maka ọkpụkpọ nke a ụdị software.
Gini mere igbanwe Clicker
N'oge na-adịbeghị anya, anọ m na-anwa ịgbalị ịnwale usoro ụfọdụ na ohere dị mfe ma ọ bụ na otu nọmba, ebe m ga-eme otu nzọ ahụ maka ntụgharị dị iche iche.
Ihe atụ? Ọ bụrụ na m na-enyocha a roulette na ► Roulette Bias Sniper na m na-aghọta na ọ bụ oge nzọ n'ihi na e nwere 7 nọmba ke hyperfrequency, ma m na-adịghị ahazi na bot ama esịne ke software n'ihi na m na-eji software maka nlekota ► Pụrụ Ime bbylọ, ekele Ndagide Clicker M ga-enwe ike ịmalite ịkụ nzọ na sekọnd ole na ole, na-enweghị ihe ize ndụ na-efu otu ogbugba nke oge dị mma m chọrọ ịnwale.
Hazi ngụda Pịa
Il Ntanetị Trigger na omume ọ bụ isi na ihuenyo ị kpebiri na nke ahụ gbanwee agba naanị mgbe a na-emeghe nzọ.
Na n'elu ikpo okwu a (otu na ọ na-adabere ► Pụrụ Ime bbylọ),, na gburugburu nke ịkụ nzọ a ngụda na sekọnd-egosi, ebe nọmba buru ibu ma na-acha ọcha na agba.
Dịka akara aka na-acha uhie uhie gosipụtara, m na-ahọrọkarị isi n'etiti etiti 1 nke ngụ oge.
Iji tinye nhazi nke isi ihe abụọ na koodu agba nke Ihe Na-akpalite, Naanị m ga-eme ka nhọrọ ahụ dị Ntughari Turbo, dowe m adịchaghị na bọtịnụ na-akwado nzọ e pịa oghere na kiiboodu, poi ozugbo na ọnụ ọgụgụ 1 nke nwunye ngụ oge (ikekwe mgbe a na-acha agba koodu gosiri na Ogwe Ama Pixel è ClWhite dị ka ọnụ ọgụgụ) ma pịa a ọzọ oghere na kiiboodu.
O doro anya na ọ bụrụ na ị na-egwuri egwu n'elu ikpo okwu dị iche, ị ga-achọ ebe dị iche iche na-akpalite, mana enwere m olileanya na opekata mpe echiche ahụ doro anya.
Nke ahụ bụ naanị, a ga-edekọ ahakọta isi ihe abụọ na mmemme ahụ na akpaghị aka!
Ka anyị weghachi: M na-elele nhọrọ Turbo Config, tinye òké ahụ na bọtịnụ nke na-akwado nzọ ma pịa oghere, wee chere ka ngụkọta nọmba 1 ịpụta na ihuenyo ahụ, jide n'aka na koodu agba dị ọcha (clwhite) wee pịa oghere ọzọ. Ọ bụ ya.
N'ikpeazụ, m ga-akọwa ọrụ nke igbe abụọ ahụ ịkpalite (n'elu aka ekpe) e Na-egbu oge: nke mbụ bụ tebụl na-arụ ọrụ ozugbo enwere Trigger Point na vidiyo (yabụ ị ga-achọpụta ọbụlagodi ma a hazie Trigger Point n'ụzọ ziri ezi), nke abụọ bụ ọnụọgụ nke sekọndrị ichere tupu ịchebe ebe Trigger Point na-egosi.
Ọ bụrụ na i tinye uru 2 n'ọhịa Na-egbu oge ọ pụtara na a ga-etinye nzọ ahụ ma emechaa 2 sekọnd ebe Trigger Point pụtara na ihuenyo.
Maka obi abụọ ọ bụla, lee vidiyo na ►YouTube.
Ya mere ọ bụrụ na m kpebie na m ga-eme otu nzọ ahụ maka 50 ntụgharị, naanị tinye uru 50 n'ọhịa Ụgbọ ala # ma pịa Gbanyụọ bọtịnụ, nke ga-doro anya gafee ON.
N'oge a, usoro ihe omume ahụ belatara, iji weghara ohere dị ka o kwere mee na desktọọpụ egwuregwu ma ọ bụrụ na nhazi ahụ emeela n'ụzọ ziri ezi, na ịkụ nzọ ọ bụla Ndagide Clicker ịpị bọtịnụ ahụ na-ekwughachi ihe omume gara aga (ị ga-enwerịrịrịrị ị ghọtala na a ga-eji aka mbụ mee ihe mbụ).
Mgbe ọ bụla nzọ etinye, na tebulu ahụ ga-eji nwayọọ nwayọọ belata ruo mgbe ọ ruru efu.
Na akụkụ dị ala nke usoro ihe omume ị nwere ike mechaa hazie abụọ mmezi nhọrọ, nke iji kpebie ihe kwesiri ime ozugbo ngụda ahụ ruru efu.
Nke mbụ bụ nhọrọ shutdown, nke doro anya na ọ gbanyụọ PC, nke abụọ bụ Nhọrọ Kpọọ Mkpu ụda, nke na-egwu na akaghị ụda ị nwere ike ịhọrọ n'etiti 8 dị.
Nke ahụ bụ ya, n'ezie, ThatsLuck! Nwee anụrị ma echefula ịdenye aha na chanel Telegram ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụchalụ akụkọ niile ma ọ bụ nata ụfọdụ ego echekwara maka ndị otu.
Nbudata Nbudata	CDClicker.zip - 2 MB